Amiir Alwaleed ayaa sheegay dumarka inaysan wadin baabuurka inay u xun tahay dhaqaalaha Sacuudiga - iftineducation.com ≡Navigasi Menu
→ Amiir Alwaleed ayaa sheegay dumarka inaysan wadin baabuurka inay u xun tahay dhaqaalaha Sacuudiga
iftineducation.com - Amiirka Sacuudiga, ee maalqabeenka ah Alwaleed bin Talal, ayaa ku baaqay in waddankisa uu ka qaado xanibaada saararan dumarka inay wadaan baabuurta.
Wuxuu sheegay inay tahay mid dhaqaalaha uu u baahan yahay iyo xaquuqda dumarka in laga qaado xanibaada.
Sacuudiga waa waddanka kaliya ee adduunka oo dhan oo dumarka aysan wadi karin baabuur, dad u ololeeya in la joojiyo sharcxiga ayaa loo xiray inay jabiyeen sharciga.
"Waxaa la joogaa waqtigii ay dumarka Sacuudiga ay wadi lahaayeen baabuur" ayuu sheegay.
Amiir Alwaliid ayaa ah ayaa ka mid ah dadka hadla ee ka tirsan boqotooyada Sacuudiga oo horay u dhaleeceeyay xadgudubka xaquuqda bin'aadanka ee dumarka Sacuudiga.
Inkastoo uusan ku jirin siyaasada waddanka, wuxuu yahay gudoomiyaha shirkada Kingdom Holding Company (KHC), oo wax ka leh Citigroub iyo Euro Disney oo ka diiwaan gashan suuqa saamiyadaha ee Sacuudiga.
'Fal xaqdaro ah'
Amiirka oo ka mid ah dadka ugu lacagta badan adduunka, ayaa sheegay: " in loo diido dumarka inaysan wadin baabuur ayaa ah maanta xuquuq la mid ah midii loo diiday inaan wax la barin ama aan la siin warqad aqoonsi.
" kuligood waa xaqdaro dhaqan bulsho, taasoo ka adag mida uu ogolaanayo sharciga dhinaca diinta."
Nimanka oo kaliya ayaa la siiyaa liisanka darawalnimada. Mudaaharaadyo looga soo horjeedo xayiraada ayaa socday 20 sano.
Hadalka amiirka oo lagu qoray website-kiisa, ayaa ku doodaya in xayiraada ay qaali ku tahay Sacuudi Carabiya.
Iyadoo aysan jirin gaadiid dadwayne oo fiican, in ka badan hal milyan oo darawal ayaa la shaqaalaysiiyaa inay dumarka baabuur ku wadaan, intooda badan ayaa ah ajnabi lacag badan lagu bixiyo.
Amiirka ayaa ku qiyaasaya in reerka caadiga ah uu ku qarash gareeyo bil walba 3,800 riyals ($1,000 ama £800) darawal, taasoo lacagta ka dhamaysa reerka.
" Waxaa jira in ka badan hal milyan oo dumar Sacuudi ah oo u baahan inay si ammaan ah shaqo u aadaan subax walba.
"Waxay mar walba masuuliyada saaran tahay in nimanka ay shaqadooda ka tagaan si ay u qaadaan xaaskooda iyo carruurtooda, taasoo ah wax ay samayn karaan dumarka kaligood.
"In la shaqaalaysiiyo darawalo ajnabi ah ayaan lacagta reerka saamayn ku yeelanayn oo kaliya, laakiin waxay keentaa in balaayiin dollar ay ka baxdo sanad walba dhaqaalaha Sacuudiga oo dibadda loo diro" ayuu ku daray.